किन भएन्न अधिकांश गृहमन्त्रीहरु सफल ? – Nepalpostkhabar
किन भएन्न अधिकांश गृहमन्त्रीहरु सफल ?
नेपालपाष्ट खबर । २० भाद्र २०७४, मंगलवार १०:५४ मा प्रकाशित
घटना एक वर्षअघिको हो । धनुषाको फुलगामा गाउँमा सम्पत्तिको विवादमा दाजु–भाइबीच कुटाकुट भयो । रामचन्द्र रायले दाइ इन्द्रकान्तलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटे । घटना प्रहरीमा पुग्यो र रामचन्द्र पक्राउ परे । दाजुभाइबीचको सो झगडाले यति ठूलो रूप लियो कि त्यसले धनुषाका तत्कालीन एसपी रामदत्त जोशीकै सरुवा गरायो । किनकि, सामान्य घटना भए पनि त्यसमा पहुँचवाला व्यक्तिको चासो थियो । त्यसको ठीक दुई साताअघि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएका थिए । घटना चुनाव क्षेत्रमा भएको थियो । त्यतिमात्र कहाँ होर, कुट्ने व्यक्ति उनकै पार्टीका कार्यकर्ता थिए । निधिले रामचन्द्रलाई तत्काल छाड्न एसपी जोशीलाई आदेश दिए । मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट भएकाले छाड्न सक्ने अवस्था थिएन । एसपी जोशीले ‘मिल्दैन हजुर’ भनिदिए । त्यसको केही घन्टामै उनलाई त्यहाँबाट सरुवा भएको फोन आयो । गृहमन्त्री निधिले उनको ठाउँमा एसपी लालमणि आचार्यलाई धनुषा पठाए । उनको सरुवा भएकै दिन रामचन्द्र छुटे । एसपी जोशी मात्र होइन, कानुनविपरीत काम नगर्दा तल्लो तहका अन्य प्रहरीको पनि सरुवा गरियो । आफ्नै सचिवालयमा काम गरेर धनुषामा सरुवा भएका एसपी जोशीमाथि भएको अन्यायलाई तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले समेत रोक्न सकेनन् । यस घटनाको प्रहरी वृत्तमा राम्रै चर्चा चल्यो ।
शर्मा मात्र होइन, पछिल्लो वर्ष नियुक्त भएका हरेक गृहमन्त्रीले गृह प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने बताएका थिए । बामदेव गौतम, विजयकुमार गच्छदार, शक्ति बस्नेतदेखि विमलेन्द्र निधिसम्मले सुधारका विभिन्न रोडम्याप तयार पार्नसम्म पछि परेनन् । बामदेव र गच्छदारले त पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
पछिल्लो एक दशकमा गृह मन्त्रालयमा कृष्णबहादुर महरा शक्तिवहादुर वस्नेत बाहेक अन्यले प्रशंसा कमाउन सकेनन् । गृहमन्त्री असफल हुनु भनेको कुनै व्यक्ति असफल हुनु मात्र होइन, राज्य नै कमजोर हुनु हो । अन्य मन्त्रीले छोटो समयमा देशमा धेरै काम गर्न सक्दैनन् । गृहमन्त्रीले देशमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्छन् । दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नेवित्तिकै गृह प्रशासनमा व्यापक सुधार हुन्छ । देशमा नाकावन्दीको समयमा पनि देशको प्रशासनिक कार्य र नेपाली प्रहरी संगै सशस्त्रको विवाद सफलता पुर्वक मिलाएका वस्नेत अरु भन्दा फरक देखिए । सरक्षा निकायका प्रमूख देखि सिपाई सम्मालाई समान रुपले हेर्ने शक्तिवहादुर वस्नेतलाई सुरक्षा निकायले निकै रुचाएका थिए । किन भने वस्नेत कहिले पनि दवाव दिएर काम गराउने गृहमन्त्री थिएन्न । राष्टियताको मुद्धामा कसैसंग सम्झौता नगर्ने वस्नेत अर्काको दवाव भन्दा आफ्नो विवेकमा चल्ने गर्छन ।